सांसदलाई गुटकाे हाेइन जनताकाे देख्ने गराैं | Mission Nepal Khabar
सांसदलाई गुटकाे हाेइन जनताकाे देख्ने गराैं
प्रिय मित्र लोक जी
धनकुटा जिल्ला पूर्व एमालेका साथी हाल स्वतन्त्र (उहाँकै शब्दमा) प्रिय लोक चेम्जोङ जी लाई खुला पत्र :
यो पत्र सामाजिक सन्जाल मार्फत तपाईको पत्रको जबाफ स्वरुप लेख्ने धृष्टता गरेको छु; नेकपा को एक कार्यकर्ता को हैसियतले ।
म तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु;तपाईं सग मेरो साक्षत्कार मेरो मानसपटले भ्याए सम्म नेकपा एमाले को पाचौ जिल्ला अधिवेसन (२०६६) मा भएको थियो । धनकुटा जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलन मा इटा थप्ने काममा तपाईको योगदान भुल्न सकिन्न ।
अब लागौ विषयवस्तु तर्फ । मैले तपाईं को शालिन शब्दमा माननीय राजेन्द्र कुमार राई को एकोहोरो निन्दा र अपूष्ट बुझाई माथि टिप्पणी राख्न खोजेको हो । तपाईं ले भने जस्तो माननीय राजेन्द्र राई धनकुटा बाट २ पटक नभै एक पटक मात्र निर्वाचित सांसद हो । प्रादेशिक राजधानी बनाउने बेला सुनिल बहादुर थापा नेपाल सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छु ।एउटै क्याबिनेट्को कमल थापाले हेटौंडा राजधानी बनाउदा धनकुटा …..?
तपाईं ले त सांसदलाई गुटको देख्नु भएछ । म सासंदलाई गुटको नभै आम जनताको देख्छु । निर्वाचित सांसद भोट दिनेको पनि हो र नदिनेको पनि । अब उहाको क्षमता को कुरा गरौ । उहाँकै नेतृत्व मा तत्कालीन नेकपा एमाले र हालको नेकपा सबैभन्दा सङगठित र व्यस्थित रहेको म यहाँलाई जानकारी गराउछु । धनकुटा जिल्ला को ७ तहको चुनावमा ७ वटै मा मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जित्नु उहाँ को नेतृत्व को कौसलता हो । त्यस्तै प्रादेशिक र संघीय चुनाव को जितले को सिंह र को स्याल भन्ने प्रष्ट पार्दैन र मित्र ।
कुन्ठा, रीस र क्रोदन को जबाफ त हुन्न । तैपनी तपाइले भने जस्तो ग्रामीण वस्तिमा गुनासो हैन जनताको आकान्क्षा फेरिएको छ । उहाँको कामको चर्चा कुनै दिन सगै बसेर गरौला । र, रकम चेम्जोङ मन्त्री हुँदा जिल्लामा त्यसको खाका पनि अध्यक्ष को हैसियतमा राजेन्द्र राईकै नेतृत्व मा बनेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । ग्रामीण वस्तिमा हिजो र आज भएको परिवर्तन हेर्न एक पटक गोडालाई कष्ट दिनुहोला । तपाईं आफै कोरोनाको कुरा गर्नु हुन्छ अनि राष्ट्रिय गौरबको योजना को । कोरोनाले धनकुटा मात्र नभै राष्ट्रिय स्तरमै विकासको गतिलाई ब्रेक लाउने निश्चित छ । विकास आज को भोलि हुने कुरा हैन परिणाम आउन समय लाग्छ ।
जहाँ सम्म योजना को कुरा र योजना बाडेर सदस्य बढाउने कुरा गर्नु भयो यो हास्यास्पद र २ कक्षाको विध्यार्थीको जस्तो टिप्पणी छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासको रकम निर्धारित योजनामा गरिन्छ । त्यसको निश्चित मापदण्ड हुन्छ । सबै वडामा समानुपातिक बाड्दा पनि ६ लाख छैसठ्ठी हजार हुन आउँछ । विशाल कार्यकर्ताको पन्क्ती भएको यस पार्टी मा किन त्यसो गर्नु ? यहांलाई प्रष्ट थाहा छ यो नेतामुखी नभै क्याडर बेस पार्टी हो । उहाँ को बानीलाई लिएर यहाँले छुद्रे टिप्पणी गर्नु भयो । राजेन्द्र राई को स्वभाव सामन्य जीवन, सहयोगी मन, र सबै सग समान व्यबहार गर्ने प्रकारको छ् । कतिपय नेताहरु आफ्नै कार्यकर्ता चिन्दैनन जस्तो तपाई को रकम चेम्जोङ त्यस्तो बानी उहाँमा छैन । सेठ पल्टिने आफ्नो नेता देखेर ईर्ष्या लाग्नु स्वभाविक हो ।
म तपाईं को मनगढन्ते कुरामा एउटा सच्याउन चाहन्छु । तपाईले साप्तिङ्टार मा आहाले तमोर बाट पानी ल्याएर हराभरा भएको लेख्नु भएको छ । त्यो आखिसल्लाको साप्तिङ्टार नभएर छिन्ताङ्को सफायाटार हो । अनि त्या रकम चेम्जोङ ले कुलो ल्याएर हैन नेकपा एमाले दुई -दुई पटक जि वि स जित्दा त्यहाँ बाट भएको काम हो । साप्तिङ्टार हराभरा चाहिँ अब प्रदेश सरकार को बजेट बाट हुँदैछ । इतिहासलाई कृपया तोडमोड नगरौ ।
रकम चेम्जोङ को गुणगान धेरै गाउनु भयो । उहाँ प्रती मेरो सम्मान छ पूर्व एमालेको नेताको रुपमा । क्षमतावान नेता खै कसरी भन्नू भयो ? २/२ पटक चुनाव मा चिप्लिएको मान्छे लाई । सिङो पार्टी थ्यो र विकासप्रेमी हुने मौका पाउनु भयो । आफै एक्लैले गरेको भए त अर्को पार्टीबाट नि चुनाव जित्नु हुन्थ्यो होला सायद । तर, साथ त तपाईहरु जस्तो छुद्रको पाए पछि के जितुन त ??
अन्त्यमा प्रिय मित्र, फेरि स्मरण गराउछु राजेन्द्र राई लोकप्रिय भएर नै चुनाव जितेर आउनु भएको हो ।तपाइँ को कुण्ठाको जबाफ दिन नसकेपनि धनकुटाको राजनीति र विकास मा उहाँ अग्रणी भूमिकामा अझ देख्ने अवसर पाउनु हुनेछ । अस्तु ।।
तपाईं को अन्जान मित्र दिवेश खड्का
संयुक्त अबर ईमिरेट्सले आणविक उर्जाबाट बिद्युत उत्पादन थाल्यो
चर्चित गायक राजेश पायल राईको आवाजमा सजिएको ‘त्यो तिमी हौ’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)